January | 2009 | The World of Pinkgold
Posted on January 31, 2009 by cuttiepinkgold
“ချစ်တယ် ချစ်တယ် ချစ်တယ် ချစ်တယ် ချစ်တယ်.. ဒါပဲနော် ကိုကို ငါးခါပြည့်အောင် ပြောပြီးပြီ.. သိပ်ဆိုးတာပဲ.. ဟွန်း”
အသံစာစာနဲ့ စကားပြောနေတဲ့ မိန်းကလေးကို လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်မတို့ အရွယ်လောက်ပဲ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ Head Phone ကနေ သေသေချာချာကို စကားပြောနေတော့တာပါပဲ။ သူ့ကွန်ပျူတာ Screen ပေါ်မှာလည်း ဂျီတော့ပေါင်း မြောက်မြားစွာကို ဖွင့်ထားလို့။ လက်ကလည်း လှုပ်၊ ပါးစပ်ကလည်းလှုပ်နဲ့၊ ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာလည်း အပြုံးတွေ ဝေလို့။ အံမယ် လက်ကလေးတောင် ချိုးပြီး ရေတွက်နေလိုက်သေးတယ် ငါးခါပြည့်အောင်လေ။ ဘေးနားက လူတွေလည်း သူ့ကို ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်နဲ့ပေါ့။ မမလေးကတော့ သူ့ ဖီလ်းနဲ့သူ အပီကို စကားပြောနေတော့တာပါပဲ။ နောက်ပြီး ဆက်ပြောလိုက်သေးတယ်…
ကိုကိုနော် အွန်လိုင်းပေါ်မှ လျှောက်ကျူမနေနဲ့.. ဒီက ကိုကို့ကိုပဲ ချစ်တာ.. မတွေ့ဖူးပေမယ့် ချစ်ပြီးသားပဲ ဟင်း ဟင်း”
ခေတ်ကာလ သားသမီးတွေများ ခက်ပါတယ်။ ကျွန်မက အိမ်အောက်ထပ်က ဆိုက်ဘာ ကဖေးမှာ အင်တာနက် လာလာသုံးလေ့ရှိတော့ အွန်လိုင်းအချစ်ဇတ်လမ်းတွေကို မရိုးနိုင်အောင် ကြုံရတယ်ရှင့်။ အွန်လိုင်းဇတ်လမ်း သီးသန့်တွေလည်းပါတယ်၊ အဝေးရောက် ချစ်သူတွေရဲ့ အချစ်ဇတ်လမ်းတွေလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ အင်တာနက်ထဲမှာ ချိန်းတွေ့ကြ၊ စကားပြောကြတာဟာလည်း Global ခေတ်ကြီးမှာ ပိုများသထက်ကို များလာပြီ။ အွန်လိုင်း အချစ်ဇတ်လမ်းတွေလည်း ပေါသထက်ကို ပေါလာပြီ။ တစ်ချို့များဆို လက်ထပ်ကုန်ကြပြီ။ ဟိုတစ်လောတုန်းက အိမ်မှာ အတူနေတဲ့ သူငယ်ချင်းဆီကို စုံတွဲတစ်တွဲ လာလည်တယ်။ ကျွန်မလည်း ကိုယ်နဲ့သိတာမဟုတ်တော့ စကားဝင်မပြောမိပါဘူး။ အဲဒီအတွဲလည်း ပြန်သွားရော သူငယ်ချင်းက ပြောပြတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က အွန်လိုင်းကနေ တွေ့ကြတာလေ.. သိပ်ချစ်ကြတာတဲ့။ ခု လက်ထပ်ပြီးသွားကြပြီတဲ့။ ကျွန်မကလည်း စပ်စပ်စုစု မေးမိပါသေးတယ်.. ဘယ်လောက်ကြာအောင် ချစ်ခဲ့ကြတာလဲဆိုတော့.. တစ်နှစ်လောက်တော့ ရှိပြီတဲ့။ အပြင်မှာ တွေ့ဖူးတာကတော့ နှစ်ကြိမ်တည်းရယ်။ ကောင်မလေးက ပြည်က၊ ကောင်လေးက ရန်ကုန်က။ ပထမ တစ်ကြိမ်မှာ ကောင်လေးက ပြည်ကို လိုက်သွားတယ်။ ဒုတိယ တစ်ကြိမ်မှာ ကောင်မလေးက ရန်ကုန်ကို လာတွေ့တုန်း တစ်ခါတည်းကို ချောင်းသာကို ခိုးပြေးတော့တာပဲတဲ့။ မိုက်တယ်ကွာ….. ဂလိုဘယ်ခေတ်မှာ မြန်လိုက်ကြပုံများ။ နှစ်ခါတည်း တွေ့ပြီး ခိုးရာလိုက်ကြရတယ်လို့။ အခုအဆင်ပြေလား မေးတော့ ပြေသမှ သိပ်ကိုပြေကြပါတယ်တဲ့။
ဟိုတစ်လောတုန်းကလည်း အဒေါ်တစ်ယောက် မင်္ဂလာဆောင် သွားမယ်ဆိုလို့ မေးကြည့်တော့ အမလေး ထက်ထက်ရယ် ပြောရအုံးမယ်.. အဲနှစ်ယောက်က နင်တို့ အင်တာနက်ကနေ တွေ့တာတဲ့တော် တဲ့။ ထက် တို့ အင်တာနက် မဟုတ်ပါဘူး အန်တီရယ် လူတိုင်းသုံးနေတာကို လို့ ပြောတော့. မဟုတ်ပါဘူး ညည်းတို့ သုံး သုံး နေတာ တွေ့လို့ ပြောတာပါအေ.. ကောင်လေးက စင်ကာပူက၊ ကောင်မလေးက အမေရီးကားက၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြိုက်လာကြပြီး အခု မြန်မာပြည်မှာ မင်္ဂလာပြန်လာဆောင်တာတဲ့။ သူတို့တွေ တစ်ပတ်လောက်တော့ နေကြလိမ့်မယ်.. ပြီးတော့ ယောင်္ကျားကလည်း စလုံးကိုပြန်၊ မိန်းမကလည်း အမေရီးကားကို ပြန်မယ်လို့ ပြောတယ် တဲ့။ နင်တို့ခေတ်မှပဲ ကြားဖူးတော့တယ်.. ကျူပ်တို့တုန်းကတော့ အရွေးမှားမှာစိုးလို့ စဉ်းစားလိုက်ရတာတဲ့။ အန်တီ့ကိုတောင် ပြောလိုက်သေးတယ် 21 ရာစုလေ အန်တီရယ်လို့။
အဲလိုပါပဲ ဟိုတစ်လောတုန်းကလည်း ကျောင်းတုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် စစ်ဗိုလ်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်တယ်။ အွန်လိုင်းမှာ တွေ့တာတဲ့။ ဆိုက်ဘာကဖေးတွေမှာလည်း VZO နဲ့ ရုပ်ကြည့်ပြီး ပြောကြတဲ့ အတွဲတွေ၊ Gtalk နဲ့ စကားပြောနေကြတဲ့ အတွဲတွေ၊ စာရိုက်ပြီး ကျူကြတဲ့ အတွဲတွေ စုံအောင်ကို တွေ့ရတော့တာပါပဲ။ ကျွန်မ သုံးနေတဲ့ ဆိုင်မှာဆို အမကြီးတစ်ယောက် နေ့တိုင်း သူ့ရည်းစားနဲ့ စကားလာပြောတာ။ နေ့တိုင်းကို နှစ်နာရီလောက် ကြာအောင် ပြောတာနော်။ ကျွန်မ နေ့တိုင်း ဆိုက်ဘာကဖေး မသွားပေမယ့် ၀ရံတာကနေကြည့်လိုက်ရင် သူ ဆိုင်ထဲ ၀င်ဝင်သွားတာကို တွေ့ရတာပေါ့။
Digital ခေတ်ကြီး တိုးတက်လာတဲ့ အချိန်မှာ အင်တာနက်တွေ ပေါပေါသီသီ သုံးလာကြတဲ့ အခိုက်မှာ၊ လူတွေရဲ့အချိန်တွေ ရှားပါးလာကြတဲ့ ဒီနေ့လိုခေတ်မျိုးမှာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အချစ်ရှာကြတာဟာလည်း အရင်တုန်းကလို မထူးဆန်းတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့ရှင်။ တစ်ကယ်ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေရှိမယ်၊ မမြင်ကွယ်ရာမှာ၊ အွန်လိုင်းမှာဆိုပြီး ရည်းစားတွေ မှိုလိုပေါက်အောင် ထားကြတဲ့ အပြောင် အပျက်တွေလည်းရှိမယ်။ ဘာပဲ ပြောပြောပေါ့လေ.. အွန်လိုင်းအချစ်ဆိုတာ လက်တွေ့ဘ၀မှာ များသထက်ကို များလာနေကြပါပြီ ဆိုတာ သိလိုက်ရတာပေါ့။
Filed under ဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်း and tagged online love |	5 Comments
Posted on January 27, 2009 by cuttiepinkgold
ညားခါစ ဇနီးမောင်နှံတွေရဲ့ဘ၀ဟာ ပျားရည်စက်လိုပဲ ချိုမြိန်လွန်းလှတယ်။
ဒါပေမယ့် မကြာလိုက်ပါဘူး အဲဒီ ချိုမြိန်တဲ့ အရသာဟာ ခါးသက်သွားခဲ့ရတယ်…..
သူမဟာ အတွင်းရေးမှူး တစ်ဦးပါ။ အလုပ်ကိစ္စကြောင့် မန်နေဂျာနဲ့အတူ ညစာစားပွဲတွေကို အမြဲလိုလို တက်ရောက်ရတယ်။ တစ်ခါက အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ အလုပ်ကိစ္စ ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။ သူမက လုပ်နေကျ အတိုင်း အချက်အလက်တွေကို ကော်ဖီသောက်ရင်း လိုက်မှတ်နေခဲ့တယ်။
သူမသောက်ခဲ့တဲ့ ကော်ဖီခွက်မှာ နှုတ်ခမ်းနီရာတွေ ထင်ကျန်ခဲ့တာကို မြင်တော့ အားတုန့်အားနာ ဖြစ်ပြီး ပေနေတဲ့ဖက်ကို မသိမသာ ကိုယ့်ဖက်ကို လှည့်လိုက်မိတယ်။ ဒါကို တစ်ဖက်ကုမ္ပဏီက အတွင်းရေးမှူး မလေးက မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်တယ်။ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး သန့်စင်ခန်းထဲမှာ အဲဒီအတွင်းရေးမှူးမလေးနဲ့ သူမ ထိပ်တိုက်တိုးခဲ့တယ်။
“နှုတ်ခမ်းနီအရောင်က အရမ်းလှတယ်နော်…. ဒါပေမယ့် အဲဒီအရောင်က ဖန်ခွက်ပေါ် ပေကျန်ခဲ့တော့ အရုပ် ဆိုးသွားရော ကျွန်မတို့လို
အတွင်းရေးမှူးဆိုတာ ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှေ့ပြေးပါ…အဲလိုဈေးပေါတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီကို မသုံးသင့်ဘူး” သူမမျက်ရည်တွေ ဝေ့တက်လာခဲ့တယ်။ လက်ထပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကိုယ်ပိုင်အိမ်တစ်လုံး ပိုင်ဆိုင် နိုင်ဖို့အတွက် “အလုပ်လုပ် ငွေစု” ဆိုတဲ့အရာက သူတို့ဘ၀မှာ အရေးအပါဆုံး ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ သူမအတွက် အ၀တ်အစားနဲ့ အလှပြင်ပစ္စည်းဆိုတာ အထွေထွေ ကုန်ကျစရိတ်ထဲက အနည်းဆုံးအရာပါ။ အရွယ်တင်တယ် ဆိုတာ ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတဲ့ အရင်းအနှီးတစ်ခုလို့ ထင်ပြီး ဈေးနှုန်းတွေကို သူမ ဂရုမစိုက်ဘဲ အပေါဆုံး နှုတ်ခမ်းနီတွေကိုပဲ ၀ယ်သုံးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့လို အဖြစ်အပျက်က သူမရင်ကို မခံချင်စိတ်နဲ့ ခံစားချက် တချို့ကို ကိန်းအောင်းစေခဲ့တယ်။
သူ့ကို အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေ သူမ မပြောပြခဲ့ပေမယ့် သူနဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်တိုင်း သူမရဲ့ စိတ်ဟာ အရင်ကနဲ့ တူမနေဘူး ဆိုတာ
သူမကိုယ်တိုင်ခံစားမိခဲ့တယ်။ တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေလိုပဲ ကြွားဝါချင်တဲ့ သူမရဲ့စိတ်ကို မပြည့်စုံခြင်းက လိုက်မဖြည့်ပေးနိုင်ခဲ့တော့ ကျောင်းတုန်းက ငွေကြေးကြောင့် လက်ထပ်ခြင်းကို ရွေးခဲ့ကြတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို တော်တယ်လို့ တစ်ခါတလေ သူမတွေးခဲ့မိတယ်။ အဲဒီလိုသာ သူမ ရွေးခဲ့မိရင် ဒီနေ့လို အဖြစ်မျိုး ကြုံရလိမ့်မယ် မဟုတ်ဘူးလို့လည်း မိုက်မိုက်မဲမဲ တွေးမိပြန်တယ်။ သူအသုံးမကျလို့ အခုလို ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့ အဖုထစ်လေးတစ်ခုက သူမရင်ထဲ ခိုဝင်လာခဲ့တော့တယ်။ သူ့ကို ဖွင့်မပြောခဲ့ပေမယ့် သူနဲ့ ပြောဖို့အတွက် သူမရဲ့စကားတွေဟာ နည်းသထက်နည်းလာခဲ့တယ်။
ပြောင်းလဲလာတဲ့ သူမရဲ့ စိတ်ကို တစ်နေ့မှာ သူမ အကောင်အထည် ဖော်လိုက်မိတယ်။ အဲဒီနေ့က ကုန်တိုက်တစ်ခုရှေ့ အဖြတ် အလှပြင်ပစ္စည်းတွေ ပရိုမိုးရှင်းလုပ်နေတာနဲ့ ကြုံခဲ့တယ်။ အရောင်းစာရေးမ တစ်ယောက်က သူမကို လှမ်းတားပြီး ပြင်သစ်ထုတ် နှုတ်ခမ်းနီတစ်တောင့် ထုတ်ပြပြီး သူမကို အစမ်းဆိုးစေခဲ့တယ်။ အရောင်ကလည်း လှ၊ ကြာရှည်ခံပြီး အခြားပစ္စည်းပေါ်မှာလဲ
မပေကျန်ခဲ့တတ်တဲ့ အကြောင်း အားပါးတရ ရှင်းပြတော့ သူမရဲ့ လိုချင်တဲ့စိတ်ကို သူရိပ်မိသွားတယ် ထင်ပါရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို သူ ထုတ်လိုက်တယ်။ ဈေးနှုန်းမေးကြည့်တော့ ၈%လျော့ဈေးဆိုပေမယ့် သူတို့ဘယ်လိုမှ မထင်မှတ်ထားတဲ့ ဈေးနှုန်းပါ။ ပိုက်ဆံအိတ်ထုတ်နေတဲ့ သူလက် တွန့်သွားခဲ့တယ်။ သူမကို သူတစ်ချက် ကြည့်လိုက်ချိန်မှာ ၀မ်းနည်းမှုတစ်မျိုးက သူမ ရင်ထဲကို တိုးဝင်လာခဲ့တယ်။ လူတွေကြားထဲက သူမ ထွက်ပြေးလာခဲ့မိတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ သူမနဲ့သူ ပထမဆုံးအကြိမ် အကြီးအကျယ်
စကားများကြတော့တယ်။ နှုတ်ခမ်းနီ တစ်ဗူးကြောင့် သူတို့ရဲ့ နွေးထွေးလှပတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ လမ်းဆုံးကို ရောက်သွားခဲ့ရတယ်။
နှုတ်ခမ်းနီတွေကို သူမပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမယ့် ပျော်ရွှင်မှုတွေကို မပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ဘူး………
ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီး သိပ်မကြာဘူး..ကုန်သည်တစ်ဦးနဲ့ သူမလက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူမ လက်ထပ်တဲ့နေ့က သူ့ဆီက ပါဆယ်ဗူး တစ်ခု
လက်ခံရရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီဘူးလေးကို သူမ ဖောက်တောင်မကြည့်ဘဲ ဘီရိုရဲ့ ချောင်တစ်နေရာမှာ ထိုးထည့်ထားလိုက်တယ်။ သူမကို ၀မ်းနည်းအောင် လုပ်ခဲ့တဲ့ သူ့ကို သတိတောင် မရချင်တော့ဘူး။ ဒုတိယအကြိမ် အ်ိမ်ထောင်ပြုခြင်းက သူမရဲ့ အလိုဆန္ဒအားလုံးကို ဖြည့်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ အ၀တ်အစားကအစ အလှပြင်ပစ္စ္စည်း၊ ဖိနပ်တွေကအဆုံး အားလုံးဟာ နာမည်ကြီး တံဆိပ်တွေပဲဖြစ်တယ်။ သူမလိုချင်တဲ့ ဘ၀နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ငွေကြေးတွေနဲ့ ခိုင်းစေခဲ့တယ်။
ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ ကုန်သည်က မနက်စောစော အိမ်ကထွက်ပြီး ညနက်မှ ပြန်လာတတ်တယ်။ တစ်ခါတလေ အိမ်ပြန်မအိပ်တဲ့ ညတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ သူမအတွက် သူ့ရဲ့ ဖြေရှင်းချက်တွေက အလုပ်များတယ်၊ အလုပ်ကြောင့်ဆိုတဲ့ စကားတွေပဲဖြစ်တယ်။ ခင်ပွန်းရဲ့ အင်္ကျီပေါ်မှာ နီရဲနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းရာတစ်ခုကို တွေ့လိုက်မိမှ အိမ်ပြန်နောက်ကျတာနဲ့ ပြန်မအိပ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေကို သူမ သဘောပေါက်လိုက်တယ်။ ခင်ပွန်းကို မေးတော့ စိတ်ပျက်တဲ့ လေသံနဲ့ “မိန်းမဆိုတာ မိန်းမလိုနေ..တခြားဘာမှ လိုက်ပတ်သက်နေစရာ မလိုဘူး… အခုလို နေရာမျိုးမှာ နင်ကျေနပ်သင့်တယ်.. စိတ်ဆိုး စိတ်တိုဖို့ မစဉ်းစားနဲ့… ငါ့ကိုနင် လက်ထပ်ခဲ့တာဟာ ငါ့စည်းစိမ်တွေကြောင့်ပဲ မဟုတ်လား…
ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ နေစမ်းပါ” ကျိန်းခနဲ ဆောင့်ပိတ်သွားတဲ့ တံခါးနဲ့အတူ ခင်ပွန်းဟာ အိမ်ကနေ ထွက်သွားခဲ့ပြီး ရက်အတော်ကြာ ပြန်မလာခဲ့ဘူး။ သူမ စိတ်ပျက်လက်ပျက် အော်ရီမိတယ်… ခင်ပွန်းရဲ့ မျက်စိထဲမှာ သူမဟာ ကပ်ပါးကောင် တစ်ကောင် ဖြစ်နေပါရော့လား…
အ၀တ်အစားတွေကို ထုတ်သိမ်းနေတုန်း ဘီရိုရဲ့ ချောင်ထဲမှာ ထိုးသိပ်ထားတဲ့ ဗူးတစ်ခုကို သူမ တွေ့လိုက် မိတယ်။ ဖောက်ကြည့် လိုက်တော့ ဟိုးအရင်တုန်းက သူနဲ့ ဈေးဝယ်ထွက်တုန်းက တွေ့ခဲ့မိတဲ့ ပြင်သစ်လုပ် နှုတ်ခမ်းနီလေး…နှုတ်ခမ်းနီဗူးရဲ့ ဘေးမှာ စာလေးတစ်စောင်…. “နှုတ်ခမ်းနီ တစ်ဗူးကြောင့် ငါတို့လမ်းခွဲ ရမယ်လို့ တစ်ခါမှ မထင်ခဲ့မိဘူး… ပြန်စဉ်းစားမိတိုင်း ရင်နာလို့ မဆုံးဘူး။ အရင်တုန်းက ထားခဲ့တဲ့ ဂတိသစ္စာတွေဟာ မျက်စိရှေ့မှာတင် မီးခိုအဖြစ်နဲ့ ပျောက်ဆုံးခဲ့ကြရပြီ။ နင့်ကို ဆုံးရှုံးလို့ ရခဲ့တဲ့ ငါ့ဒဏ်ရာ တွေဟာ ဒီနေ့အထိ အရှင်လတ်လတ်ပဲ ရှိနေသေးတယ်။ ဒါတွေကို ပြောနေလို့လဲ အရာမရောက်တော့ပါဘူး…
အိမ်ထောင်သစ်နဲ့ နင်ပျော်နိုင်ပါစေ…ဒီနှုတ်ခမ်းနီလေးက နင့်အတွက် ကံကောင်းခြင်းတွေ သယ်လာနိုင်ပါစေ”
နှုတ်ခမ်းနီကို အိတ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး “ပြီးဆုံးခြင်း” ဆိုတဲ့တံခါးကို ဒုတိယအကြိမ် သူမ ပိတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ အေးစက်တဲ့ အဲဒီလက်ထပ်ခြင်းမျိုးက သူမအတွက် ဘာသံယောဇဉ်မှ ကျန်မနေခဲ့တော့ပါဘူး။
တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုမှ သူ့ရဲ့ အင်တာဗျူးကို သူမကြည့်လိုက်ရတယ်။ သူဟာ ပြည်တွင်း အလှကုန်ပစ္စည်းတွေ ဖြန့်တဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတောင် ပိုင်ဆိုင်ထားပါလား… သူ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ အဓိက ဖြန့်ကုန်တွေဟာ နှုတ်ခမ်းနီပါတဲ့။ ဘာကြောင့် နှုတ်ခမ်းနီတွေပဲ ဖြစ်ရတာလဲလို့ အင်တာဗျုးသူတွေက မေးတော့ သူက စိတ်ထိခိုက်စွာနဲ့ “နှုတ်ခမ်းနီ တစ်ဗူးကြောင့် ကျွန်တော့် အိမ်ထောင်ရေး ဆုံးရှုံး သွားခဲ့ရဖူးတယ်။ အဲဒီနှုတ်ခမ်းနီက ဈေးအရမ်းမကြီးပေမယ့် သူ့အတွက် ကျွန်တော်မ၀ယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး။
အဲဒီနှုတ်ခမ်းနီဟာ သူ့အတွက် ဘယ်လောက် အရေးပါသလဲဆိုတာ ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ဈေးပေါတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီကို သုံးခဲ့လို့ ဖန်ခွက်ပေါ်
ပေကျန်ခဲ့တဲ့ နှုတ်ခမ်းရာတွေဟာ သူ့စိတ်ကို တော်တော်လေး ထိခိုက်စေခဲ့တယ်။ မပေတတ်တဲ့၊ မကပ်ကျန် ခဲ့တတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီက သူ့အတွက် လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်တော် မသိခဲ့ဘူး။ နောက်မှ သူနောက်အိမ်ထောင်ပြုမယ့်နေ့ရောက်မှ သူ့သူငယ်ချင်းဆီက အဖြစ်မှန်တွေကို ကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနှုတ်ခမ်းနီကို ကျွန်တော်ဝယ်ပေးခဲ့ပေမယ့် သူဟာ တစ်ခြားသူရဲ့ ဇနီးမယား ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ.. အဲဒီနေ့ကစပြီး နှုတ်ခမ်းနီတွေကို ဖြန့်ဖို့၊ ဖန်ခွက်ပေါ် မပေကျန်ခဲ့တတ်တဲ့ နှုတ်ခမ်းနီတွေကို မိန်းကလေးတိုင်း ၀ယ်နိုင်ဖို့ လုပ်မယ်လို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်”
တီဗွီဖန်သားပြင်ကို သူမ ငေးစိုက်ကြည့်ရင်း မျက်ရည်တွေက ပါးပြင်ပေါ်ကို အဆက်မပြတ် စီးကျလို့ လာခဲ့ တယ်။ သူမလက်ထဲမှာ တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေး တစ်ခုကတော့ ကျိုးပဲ့လို့ နေခဲ့ပြီလေ…..
“မှားယွင်း” ပြီးမှ “နောင်တ”ဆိုတဲ့အရာက အမြဲတံခါး လာခေါက်တတ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း.. သေးငယ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ကြီးကြီး မချမိစေဖို့ ဒီဇာတ်လမ်းက ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။
(ရုံးတွင်းသုံး IIS Forum မှ ဝေမျှချက်တစ်ခုကို ကူးယူပါသည်)
Filed under Copy |	Leaveacomment
Article of Dr. Nay Zin Latt
Posted on January 15, 2009 by cuttiepinkgold
Wednesday, 24 December 2008 11:39
နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒဏ်ရဲ့ အရှိန်က မသေသေးတော့ ဒုက္ခ ရောက်နေတဲ့ သူတွေကို တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေ ဆက်ကူကြဖို့ ပြောဖြစ်ကြတယ်။ သူ့ရည်ရွယ်ချက်က ကောင်း တယ်။ အပျက်ပျက် အယွင်းယွင်း ဖြစ်သွားတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းက လူငယ် ကျောင်းသားလေးတွေကို သူကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရေး လိုင်းဘက်က ဖြည့်ဆည်းဖို့၊ သူ တော်တော် ဒုက္ခခံပြီး အကြိမ်များစွာ ရောက်ခဲ့တယ်နဲ့ တူတယ်။ ဘမောင်တောင်မှ ၂ ခေါက်ပဲ ရောက်ဖြစ်တယ်။
ဟိုကလာလည်းထည့်၊ ဒီကလာလည်းထည့်နဲ့ တဘိုင်းဘိုင်း ထည့်လိုက် ရလို့ ဘမောင်တို့ ဆရာ ဦးအေးကျော်နဲ့ တွေ့တဲ့ အချိန်ကျ တော်တော်ပန်းသွားပြီ။ ငွေအနေနဲ့ ငါးသိန်းလောက်ပဲ ထည့်နိုင်တော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာဒါန အနေနဲ့ ကတော့ လိုတဲ့နေရာမှာ သုံးဖို့ လက်ခံလိုက်တယ်။ ခရီးတော့ သိပ် မထွက်နိုင်ဘူးပေါ့။
“ဆရာရေ ဆရာ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက်နဲ့ Leadership Skills ခေါင်းစဉ်မှာ တွဲပြောဖို့ စီစဉ်လိုက်ပြီ။ IBC မှာ၊ နာဂစ် ရန်ပုံငွေပေါ့”
ဘမောင် လက်ခံ လိုက်ပါတယ်။ ဆရာ ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက် ဆိုတာ ပါမောက္ခတစ်ဦး၊ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ်က UN ၀န်ထမ်းတွေ တော်တော် များများကို နှစ်ပေါင်း ဆယ်နဲ့ ချီပြီး လေ့ကျင့် ပေးနေတဲ့သူ၊ မြန်မာပြည် မှာလည်း အဲဒီ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွေကို အကြိမ်ရေ အများဆုံး ပြောနေတဲ့သူ၊ ပညာရော၊ သမ္ဘာရော ကြီးသူ တစ်ဦးပါ။ စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ၊ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ Speaker အဖြစ် “ပေါက်” သူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Leadership Skills ဆိုတော့ ခေါင်းဆောင် ကျွမ်းကျင်မှု။ အရည် အသွေးပေါ့။ ပြောရတဲ့ အပိုင်းက ဘမောင် အတွက် ပြဿနာ သိပ်မရှိဘူး။ သီအိုရီနဲ့ စီးပွားရေး နယ်ထဲမှာ နှစ် ၂၀ လောက် လုပ်လာတဲ့ နိုင်ငံတကာ အတွေ့ အကြုံတွေကို ထည့်ပြောသွားရင် ကိစ္စ ပြီးတယ်။ စိတ်ပူလိုက်တာက လူတစ်ဦး လက်မှတ်ခ လေးသောင်း ဆိုတာပဲ။ ဘမောင်တို့ အဲဒီလောက် အထိ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား၊ လေးသောင်း လောက်ပေးပြီး နားထောင်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလားလို့ စိတ်တော့ နည်းနည်း ပူမိတယ်။ အမှတ်မမှားရင် အမြင့်ဆုံးကြေးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဦးအေးကျော်ကိုတော့ ဖွင့်မပြောဖြစ် ပါဘူးလေ။
ဘမောင် စိုးရိမ်တာ လွဲသွားတယ်။”တွတ်ပီ” ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့။
ဦးအေးကျော် သတ်မှတ်တဲ့ ကန့်သတ် အရေအတွက်ထက် တောင်းဆိုမှုက နှစ်ဆလောက် ဖြစ်နေတာ အနားနီးတော့ သိလိုက်ရတယ်။
ဘာပဲပြောပြော စီးပွားရေးတွေ တွန့်ဆုတ်နေတဲ့ ကာလမှာ အဲဒီ တောင်းဆိုမှုဟာ အလားအလာကောင်း တစ်ခုပါလား ဆိုပြီး ဘမောင် ၀မ်းသာ မိတယ်။ ၀မ်းသာဖြစ်ရတယ်ပေါ့။ ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်က Leadership Intelligence ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာ ပထမနေ့ နံနက်ပိုင်း ပြောသွားတယ်။ ဘမောင်က 24th မနက်ပိုင်းမှာ Leadership in Action ဆိုပြီး လက်တွေ့ ခေါင်းဆောင်မှု အပိုင်းကို ပြောဖြစ်တယ်။ ဦးအေးကျော်က ခေါင်းဆောင်မှု အပေါ် သူ့အမြင်ဘက်က တင်ပြပြီး Group Actiivity တွေနဲ့ အနားသိမ်းပေးရှာတယ်။ အစီအစဉ် ကောင်းတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲ အပြီး မေးကြတဲ့ မေးခွန်းတွေကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ အဆင့်အတန်း အမြင့်ကြီးတွေ မဟုတ်တာတောင်မှ အဆင့် မနိမ့်တော့ဘူး။ အဲဒီ အတွက်လည်း ၀မ်းသာရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ်က ဦးလှမောင်ရွှေ တို့ရဲ့ နှစ်ပတ် တစ်ကြိမ် ပုံမှန် စီစဉ်နေတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ အထောက်အကူက လူငယ်၊ လူလတ်၊ လူကြီး တချို့ကို အမြင် ဖွင့်ပေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်း ပါတယ်။သူတို့ ကိုယ်တိုင်က လိုလိုချင်ချင် လေ့လာ မှတ်သား ထားတတ်ကြတဲ့ အခြေခံ အရည်အချင်းကြောင့်လည်း ပါပါတယ်။
ခေါင်းဆောင် (Leader) လို့ပြောရင် တချို့က အမြင့်ကြီး လှမ်းတွေးလေ့ ရှိကြတယ်။ တကယ်တော့ နှစ်ယောက် တစ်ပိုင်းရှိတဲ့ မိသားစုမှာလည်း ခေါင်း ဆောင်ရှိတယ်။ ဆယ့်လေးငါးယောက်လောက်နဲ့ ကုမ္ပဏီမှာလည်း ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်။ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး ကဏ္ဍစုံမှာလည်း ခေါင်းဆောင်တွေ ရှိကြပါတယ်။ ဘမောင်တို့ အလေးအနက်ထား ပြောတာက စီးပွားရေးဘက်က ခေါင်းဆောင်တွေ အကြောင်း၊ သူတို့ရဲ့ အရည် အသွေး၊ ကျွမ်းကျင်မှု ဘယ်လောက် ရှိရမယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း။
Globalization အကြောင်း ဘမောင် ရှင်းပြတယ်။ ကမ္ဘာဆန်မှုက အနောက်နဲ့ အရှေ့၊ ကမ္ဘာ့အပေါ်ခြမ်း အောက်ခြမ်း ယဉ်ကျေးမှုကအစ အမြင် အသိတွေ အကူးအလူးကြောင့် မဖွံ့ဖြိုး သေးတဲ့ နိုင်ငံတွေက စီးပွားရေးခေါင်း ဆောင်တွေ ကိုယ့်ပေတံနဲ့ ကိုယ်တိုင်းလို့ မရတော့ဘူး။ အဲဒီ ကမ္ဘာဆန်မှုက အရည်အသွေး နည်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဆွဲတင် သွားတယ်။
၁၉၂၀ လောက်မှာ Globalization သိသာလာတယ်။ ၁၉၅၀ လောက်ကျတော့ နိုင်ငံ ၂၀ လောက် ပါလာပြီး ၁၉၇၀ မှာ နိုင်ငံပေါင်း ၄၀နဲ့ အခု ဆိုရင် နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ နီးပါး ကမ္ဘာဆန်ခြင်းရဲ့ ရေစီးထဲ မျောပါ သွားကြပြီ။ ကမ္ဘာမှာ စုစုပေါင်း နိုင်ငံ ၂၀၀ လောက်ပဲ ရှိတယ်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ လောက် ကမ္ဘာဆန်တယ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာ နိုင်ငံတိုင်း အပြည့်အ၀တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ တချို့နည်းနည်း၊ တချို့များများ သက်ရောက်မှုတွေကို ငြင်းမရဘဲ လက်ခံ လိုက်ရတယ်။
ကမ္ဘာဆန်တဲ့ ရေစီးကြောင်းမှာ Change ဆိုတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ အများကြီး ပါလာပါတယ်၊ Hamburger ကအစ နည်းပညာ၊ အတွေးအခေါ်၊ အသုံး အဆောင် အများကြီး ပဲပေါ့။ အားလုံးကိုတော့ ငြင်းဆန်လို့ မရဘူး။ လူအမျိုးမျိုး၊ စိတ်အထွေထွေမှာ ယူသင့်တာယူ၊ ပယ်သင့်တာပဲ ပယ်လို့ရမယ်။ ခြုံငုံပြီးတော့ ကမ္ဘာဆန်မှုရဲ့ သက်ရောက်ခြင်း (Impact) အပေါ် ဘယ်လို မှတ်ချက်ပေးကြသလဲဆိုရင်…
‘You learn to change rather than becomingavictim of change’ ဆိုတဲ့ အပြောင်းအလဲပေါ်မှာ သင်ခန်းစာ ယူပြီး လိုက်ပါမလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် အပြောင်းအလဲရဲ့ သားကောင် အဖြစ် ခံမလားလို့ ဆိုလိုတာပါ။ တိုးတက်ဖို့ ရှာကြံကြတဲ့ သူတွေကတော့ သားကောင်အဖြစ် ဘယ်ခံပါ့မလဲလေ။
ခေါင်းဆောင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု (Leader-Leadership) ကို ခပ်တိုတို နားလည်အောင် သည်လိုလည်း ပြောကြလေရဲ့။
Previous learning, experiences and influence.
အတိတ်က လေ့လာခဲ့မှု၊ အတွေ့ အကြုံနဲ့ တစ်ဖက်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်မှုပေါ့။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေက သူတို့ ပြောတာကို ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ ရှိကြတယ်။ အပြောတခြား အလုပ်တခြား မဟုတ်ဘူး။ မုသားမပါ၊ လင်္ကာ မချော နဲ့တော့ မရောစေချင်ဘူးပေါ့။ Leaders practice what the preach တဲ့။
ခေါင်းဆောင်တွေကို အရင်က သီးခြား လူတန်းစားလို့ သဘောထား ခဲ့တဲ့ အယူအဆ ရှိဖူးတယ်။ အခုခေတ်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ Leaders, as members ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တသားတည်း ကျသွားပြီ။ ခေါင်းဆောင်ဟာ သီးခြား ဖြစ်ခဲ့ရင် အာဏာရှင် ဆန်သွား နိုင်လို့ပါ။ ပြီးတော့ Leader တွေဟာ Responsibility ဆိုတဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ Accountability ဆိုတဲ့ တာဝန်ခံမှုတွေ ကိုလည်း မငြင်းဆန်ရပါဘူး။ တချို့က လုပ်ငန်း အတွက် တာဝန်ယူ တတ်ကြ ပေမယ့် ရလဒ် အပေါ် တာဝန် မခံချင်ဘူး။ ဥပမာ ကုမ္ပဏီက အကြီးအကျယ် ရှုံးရင် တာဝန်ခံလို့ နုတ်ထွက်ပေးလိုက် ရတာမျိုးပေါ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကျိုးထက် အများ အကျိုးကို ပိုပြီး လေးစားတဲ့ သဘောလည်း ဖြစ်တယ်။
အရင် ခေါင်းဆောင်တွေက တာဝန် လွှဲပြောင်းယူလို့ ရှိရင် Commitment ဆိုတဲ့ ကတိစကား သိပ်မပေး ရဲကြဘူး။ အခုခေတ် ခေါင်းဆောင်တွေက “ဘာဖြစ်စေ ရပါ့မယ်” ဆိုတဲ့ ကတိ စကားကို ရဲရဲကြီး ပေးလေ့ရှိကြတာ ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုလို့တောင် ပြောလို့ရပြီ။ CEO ထဲမှာ ဘမောင် သဘောကျတဲ့ Carlos Ghson ဆိုရင် နစ်ဆန်း မော်တော်ကား ကုမ္ပဏီကြီးကို လွှဲယူတော့ အကြွေး ပါလာတဲ့ (US$ 2.4 bil) ကို ၂ နှစ် အတွင်း ပြန်ဆပ်မယ် ဆိုတဲ့ ကတိစကား နဲ့ တာဝန်ကို လက်ခံခဲ့တယ်။ သူပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း လုပ်ပြခဲ့တယ်။ မြန်မာ့ စီးပွားရေး လောကမှာ အဲသလို လူမျိုး အများကြီး ရှိစေချင်တယ်။
နောက်ရှိသေးတယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေ ရှိသင့်တဲ့ နေရာနဲ့တာဝန်၊ Position ပေါ့။ အရင် ပုံစံဟောင်းမှာ ခေါင်းဆောင် ဆိုတာ ဦးဆောင်သူဖြစ်လို့ မြားရဲ့ထိပ် မှာ ရှိသင့်တယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ ဘာလုပ်လုပ် ခေါင်းဆောင်က ရှေ့ကသွားတယ်။ မြားအလယ် နေရာမှာ မန်နေဂျာ တွေပေါ့။ မြားအမြီးမှာ သာမန် ၀န်ထမ်းတွေ၊ အခုခေတ် ခေါင်းဆောင် တွေကျတော့ အယူအဆ ပြောင်းသွား ကြပြီ။
လေးက ထွက်သွားတဲ့ မြားက ခရီးတော့ ရောက်ပါရဲ့။ လိုချင်တဲ့ နေရာ ရောက်ဖို့လိုတယ့်အယူအဆပေါ်မှာ အခြေခံတာ၊ အဲဒီမြား လိုရာခရီး လည်းရောက်၊ သွားချင်တဲ့ “လားရာ” လည်း မှန်အောင်လို့ ထိန်းညှိ တည့်မတ် ပေးတာက မြားအမြီးပိုင်း ဆိုတာ တွေ့လာရတယ်။ အဲဒီ အယူအဆနဲ့ အခုခေတ် ဖွဲ့စည်းပုံတွေမှာ မန်နေဂျာတွေ မြားထိပ်မှာနေ၊ အလယ်က ၀န်ထမ်းတွေ၊ နောက်ဆုံး မြားအမြီးက ပဲ့ထိန်း အနေနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ နေကြတော့တယ်။ အဲဒီ အယူအဆနဲ့ အလုပ်လုပ်တာ ပိုမှန်တယ်။ ပိုလည်း ထိရောက်တယ်။ ခေါင်းဆောင် ဆိုတာ Guidance ဆိုတဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု ပေးဖို့ပဲ။ နေရာတကာ သူပါလို့မှ မဖြစ်တာ။
ဘမောင်တို့ ဆီက အဖွဲ့အစည်း ယဉ်ကျေးမှုမှာ ခေါင်းဆောင်တွေ နေရာ တကာ ရှေ့ကနေတာ ရှိနေတုန်းပဲ။ Old Model ကို စိတ်မကုန် သေးလို့နဲ့ တူတာပဲ။
ခေါင်းဆောင်နဲ့ ပတ်သက်လာရင် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အယူအဆ တစ်ရပ် ရှိသေးတယ်။
Leaders are born (မွေးရာပါ)
Leaders are made (လေ့ကျင့်ယူခြင်း)
1940s ခေတ်တွေဆီက ဟစ်တလာတို့၊ ရုစဗဲ့လ်တို့၊ စတာလင်တို့ရဲ့ အမူအကျင့်တွေနဲ့ ချဉ်းကပ်ကြတဲ့ သူတွေက ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ မိုးပေါ်က ကျလာသလိုပဲ မွေးရာပါ ဇာတာ ပါလာသူတွေလို့ ဆုံးဖြတ်ကြတယ်၊ 1960s ခေတ်တွေ ရောက်လာတော့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီး၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ကျောင်းကြီးတွေက မွေးထုတ် လိုက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ မနည်းမနော ကြီးပွားလာကြတာ တွေ့ရတော့ ‘Leaders are made’ ဆိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို လေ့ကျင့် ယူလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆက ခြေဖျက်လိုက်တယ်။ ခရစ်နှစ် (၂၀၀၀) ကျော်မှာတော့ ပြောစရာ မလိုတော့ဘူး။ ပညာ ကောင်းကောင်း သင်ပြီး အတွေ့ အကြုံ ကောင်းကောင်း ပေးနိုင်ရင် ဘယ်သူမဆို ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခွင့် ရှိသွားကြပြီ။ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတယ်။
ခေါင်းဆောင်ရဲ့ စရိုက်၊ အမူအကျင့်၊ အလေ့အထနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာလိုက်ရင် အမျိုးပေါင်း ၅၀ ကျော် လောက် ရှိတယ်။ သန်ရာ သန်ရာ အခြေခံ ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့။ အဲဒီထဲက Autocratic (အာဏာရှင်)နဲ့ Democratic (ဒီမိုကရက်တစ်) ဆိုတဲ့ ခေါင်းဆောင် နှစ်မျိုးရဲ့ လုပ်ပုံကိုင်ပုံ၊ အကျိုးရလဒ် တွေက နှိုင်းယှဉ်ပြဖို့ ကောင်းလာတယ်။ Decision Making ဆိုတဲ့ အဆုံးအဖြတ် ပေးမှုအပေါ် အခြေခံပြီး လေ့လာရရင် Autocratic Leader က အဆုံး အဖြတ်ကို သူတစ်ဦးတည်း လုပ်တယ်။ Democratic Leader က တိုင်ပင်၊ ညှိနှိုင်း၊ ဆွေးနွေးပြီးမှ အသင့်လျော်ဆုံးလို့ ထင်တဲ့ အဆုံးအဖြတ်ကို ပေးတယ်။ Autocratic / Democratic ဆိုလို့ နိုင်ငံရေးမှာ တင်ချည်း ရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ စီးပွားရေးမှာလည်း ရှိတယ်။ လူမှုရေးမှာလည်း ရှိတယ်နော်။ မိသားစုလေး တစ်ခုအတွင်း မှာလည်း ရှိတယ်။
နောက် ဒုတိယအချက်က Control of Operation ဆိုတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုကို ထိန်းသိမ်းတဲ့ အချက်၊ Autocratic က အရာရာကို သူကိုယ်တိုင် ညွှန်ကြားတယ်။ သူမပါရင်မပြီးဘူး။ Democraticက စနစ် (System) တစ်ခုကို ထူထောင်ပြီး အဲဒီ စနစ်ရဲ့ အပံ့အပိုးနဲ့ လုပ်တယ်။
နောက် တတိယအချက်က Communication ဆိုတဲ့ အပေါ်အောက် အပြန်ပြန် အလှန်လှန် ဆက်သွယ်ရေး လမ်းကြောင်း၊ Autocratic ကတော့ လားရာမဲ့ သူအမိန့် ပေးလိုတဲ့ သူကို တိုက်ရိုက် အမိန့် ပေးတဲ့ စနစ်ကို သုံးတယ်။ Democratic ကတော့ ပြန်လည် ဆွေးနွေးခွင့်၊ တင်ပြခွင့်၊ အကြံ ဥာဏ် ဖလှယ်ခွင့် စတာတွေကို ပေးတယ်။ စနစ်တစ်ခုရဲ့ အောက်မှာပဲ အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့။ အဲဒီ အခြေခံ မူလ ပင်မ သုံးချက် အပေါ် အကွာအဟကို နှိုင်းယှဉ် လိုက်တော့ နောက်ဆုံး အဖြေ ရလဒ်မှာ Autocratic က စွန့်စားရမှု များပြီး ရလဒ် ကောင်းထက် ဆန့်ကျင် ဘက်ကို ရတာများတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီမိုကရက်တွေကတော့ သင့်တင့်တဲ့ စွန့်စားမှု (Moderate Risk) လောက် သာရှိပြီး ရလဒ်ကောင်းတွေ ရတတ်တာ သာဓက အများကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရက်၊ အော်တိုကရက်လို့ ပြောရင် နိုင်ငံရေး ရှုထောင့် တစ်ခုတည်းကသာ ကြည့်လို့ ရတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ စီးပွားရေးမှာပါ လုံးဝ အကျုံးဝင်တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Filed under Uncategorized and tagged Business |	3 Comments